Windows 10 auto updates ကို ပိတ်နည်း တစ်ခု - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Windows 10 Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ Windows 10 auto updates ကို ပိတ်နည်း တစ်ခု
Maung Pauk at 9:30:00 PM Windows 10, Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ,
Windows 10 auto updates ကို ပိတ်နည်း
Windows 10 auto updates ကို ပိတ်တဲ့နည်းတွေ တော်တော်တော့များပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ပြဿနာက နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Windows 10 64bit တွေမှာ ပိတ်လို့မရပါဘူး.. ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် စမ်းကြည့်ခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေတဲ့နည်းတွေကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.. ခုတော့ အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိထားလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Win+R ကိုနှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Run Box ထဲမှာ giedit.msc ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ကာ Enter ခေါက်လိုက်ပါ..
Local Group Policy Editor ပေါ်လာပါမယ်...
Local Group Policy Editor ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက Computer Configuration အောက်က Administrative Templates ကိုခွဲ.. Windows Components ကိုခွဲ.. Windows Update ကိုနှိပ်ပါ...
ညာဘက်ခြမ်းမှာ Configure Automatic Updates ဆိုတဲ့ စာတမ်းကိုရှာပြီး Double Click ခေါက်ပါ..
အဲဒီမှာ Configure Automatic Updates စာတမ်းရဲ့ အောက်နားမှာ Enable ကိုရွေးပါ..
Options အောက်က Configure Automatic Updating အောက်မှာ Drop Down Menu ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရွေးချယ်စရာ (၄)ခုရှိပါတယ်..
Update ကို Download မလုပ်ခင်နဲ့ Install မလုပ်ခင် သတိပေး
Update ကို အလိုအလျောက် Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ဖို့ သတိပေး
Update ကို အလိုအလျောက် Download လုပ်ပြီး အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ကာ Install လုပ်မယ်
ကွန်ပျူတာ Admin က Setting ကိုရွေးချယ်မယ်..
ကျွန်တော်ကတော့ နံပတ် ၂ (2 - "Notify for download and notify for install.") ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Automatic Update ကို ပိတ်လို့မရပါဘူး.. အခု ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာက Update ကို Download မလုပ်ခင်ကတည်းက သတိပေးခိုင်းဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာပါ.. ဒါမှသာ ကွန်ပျူတာက Automatic Update လုပ်ဖို့ သတိပေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်က Download မလုပ်မချင်း Update က အလိုအလျောက် Update မဖြစ်တော့ပါဘူး..
ပြီးရင်တော့ Apply နှိပ်၊ OK နှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ..
ဒီနည်းလမ်းက သဘောကျကြမယ် မထင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တွေ့သမျ နည်းလမ်းတွေထဲမှာ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်..
Windows 10 auto updates ကို ပိတျတဲ့နညျးတှေ တျောတျောတော့မြားပါတယျ.. ဒါပမေယျ့ ပွဿနာက နောကျပိုငျးထှကျလာတဲ့ Windows 10 64bit တှမှော ပိတျလို့မရပါဘူး.. ကြှနျတျော အကွိမျကွိမျ စမျးကွညျ့ခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွတေဲ့နညျးတှကေိုပဲ တှခေဲ့ရပါတယျ.. ခုတော့ အဆငျပွတေဲ့နညျးလမျးတဈခုကို တှရှေိ့ထားလို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ..
Win+R ကိုနှိပျပွီး ပျေါလာတဲ့ Run Box ထဲမှာ giedit.msc ဆိုပွီးရိုကျထညျ့ကာ Enter ခေါကျလိုကျပါ..
Local Group Policy Editor ပျေါလာပါမယျ...
Local Group Policy Editor ရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးက Computer Configuration အောကျက Administrative Templates ကိုခှဲ.. Windows Components ကိုခှဲ.. Windows Update ကိုနှိပျပါ...
ညာဘကျခွမျးမှာ Configure Automatic Updates ဆိုတဲ့ စာတမျးကိုရှာပွီး Double Click ခေါကျပါ..
အဲဒီမှာ Configure Automatic Updates စာတမျးရဲ့ အောကျနားမှာ Enable ကိုရှေးပါ..
Options အောကျက Configure Automatic Updating အောကျမှာ Drop Down Menu ကိုနှိပျလိုကျရငျ ရှေးခယျြစရာ (၄)ခုရှိပါတယျ..
Update ကို Download မလုပျခငျနဲ့ Install မလုပျခငျ သတိပေး
Update ကို အလိုအလြောကျ Download လုပျပွီး Install လုပျဖို့ သတိပေး
Update ကို အလိုအလြောကျ Download လုပျပွီး အခြိနျဇယားသတျမှတျကာ Install လုပျမယျ
ကှနျပြူတာ Admin က Setting ကိုရှေးခယျြမယျ..
ကြှနျတျောကတော့ နံပတျ ၂ (2 - "Notify for download and notify for install.") ကိုရှေးလိုကျပါတယျ..
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Automatic Update ကို ပိတျလို့မရပါဘူး.. အခု ကြှနျတျောရှေးလိုကျတာက Update ကို Download မလုပျခငျကတညျးက သတိပေးခိုငျးဖို့ ရှေးခယျြလိုကျတာပါ.. ဒါမှသာ ကှနျပြူတာက Automatic Update လုပျဖို့ သတိပေးတဲ့အခါ ကြှနျတျောက Download မလုပျမခငျြး Update က အလိုအလြောကျ Update မဖွဈတော့ပါဘူး..
ပွီးရငျတော့ Apply နှိပျ၊ OK နှိပျပွီး ကှနျပြူတာကို Restart လုပျပေးလိုကျပါ..
ဒီနညျးလမျးက သဘောကကြွမယျ မထငျပမေယျ့ ကြှနျတျောတှသေ့မြ နညျးလမျးတှထေဲမှာ အဆငျအပွဆေုံးဖွဈပါတယျ..
Windows 10, Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ
Windows 10 Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ